MDC T | The Africa Report
Zimbabwe: Thousands hit the streets in anti-Mugabe protest
Thursday, 14 April 2016 Nqobile Bhebhe
Zimbabwe's main opposition party MDC on Thursday staged an unlikely demonstration, attracting close to 10,000 people in the capital, Harare demanding an end to President Robert Mugabe's rule.
Fired Zimbabwe Vice-President unveils manifesto
Thursday, 10 September 2015 Nqobile Bhebhe
A former Zimbabwe Vice President has published a manifesto, signaling her return to active politics a few months after she was fired by President Robert Mugabe.
Mugabe's govt warned over brewing electoral promise unrest
Tuesday, 09 September 2014 Janet Shoko
Zimbabwean President Robert Mugabe must make good on his election campaign promises or risk civil unrest from an increasingly restive public service, the speaker of the country's national service has warned.
Zimbabwe delays 2014 budget after financial support rejection
Monday, 04 November 2013 Janet Shoko
Zimbabwe says it efforts to secure financial support from the World Bank and the International Monetary Fund have been rejected amid reports the country's external debt now stands at $11 billion.
Monday, 28 October 2013 Stephen Chan
Zimbabwe: MDC unable to prove election rigging - MDC-T official
Tuesday, 15 October 2013 Janet Shoko
A top MDC-T official has admitted that her party lost the July 31 elections to rival President Robert Mugabe of Zimbabwe and they were still to find evidence to back their rigging claims.
Concerns over special voting mount in Zimbabwe
Thursday, 04 July 2013 Janet Shoko
Zimbabwe Electoral Commission has announced that the country's armed forces will vote mid July amid reports that over 50 000 police officers have registered as special voters.
Tough road ahead for Zimbabwe Electoral Commission's new head
Tuesday, 23 April 2013 Frank Chikowore in Harare
Rita Makarau, the new chair of the Zimbabwe Electoral Commission has a formidable task ahead of her.
Mugabe "deeply concerned" over violence
Wednesday, 27 February 2013 Prince Ofori-Atta
Zimbabwean President Robert Mugabe has instructed the police to arrest all perpetrators of political violence amid heightened tensions ahead of elections.
Zimbabwe Party threatens clampdown against businesses with Mugabe links
Tuesday, 08 January 2013 Janet Shoko
Zimbabwe Premier Morgan Tsvangirai’s party MDC-T plans a massive crack down on ‘corrupt’ businesspeople and kick out diamond mining firms perceived to be bankrolling President Robert Mugabe’s Zanu PF.
Mugabe's vacation could thwart Zimbabwe elections
Monday, 31 December 2012 Prince Ofori-Atta
Speculation on when Zimbabwe will hold its elections continues to grow, with analysts saying it was highly unlikely that the polls will be held in March.
Zimbawe: MDC plans fall apart
Monday, 10 December 2012 Janet Shoko
Zimbabwe Prime Minister Morgan Tsvangirai's MDC-T party has dangled a carrot to other opposition parties to join it in an electoral pact ahead of next year's elections.
Zimbabwe's coalition in danger of collapse ahead of polls
Monday, 08 October 2012 Janet Shoko
Zimbabwe Prime Minister Morgan Tsvangirai has threatened to pull out of the inclusive government with President Robert Mugabe, five months before the country holds general elections.
Zimbabwe: President Mugabe's polls proposal dismissed
Thursday, 27 September 2012 Janet Shoko
President Robert Mugabe has proposed that the southern African country have elections next March, but his rivals quickly dismissed the timeline as unfeasible.
Mugabe will win presidential election - survey
Thursday, 23 August 2012 Janet Shoko
An independent poll shows that Zimbabwe President Robert Mugabe's support is surging while that of his main rival Prime Minister Morgan Tsvangirai has dropped significantly.